Usuku lwama-2021 lwase-Uganda lwabafeli-nkolo lubhiyozelwa ngenxa yesifo se-COVID-19
Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zaseUganda zokuhamba » Usuku lwama-2021 lwase-Uganda lwabafeli-nkolo lubhiyozelwa ngenxa yesifo se-COVID-19
Isiganeko sonyaka ophelileyo sasisisitshixo esisezantsi esinokufikelela kwabahambi ngezonqulo ngenxa yokuvalwa kwelizwe.
Ngabantu abahambahambayo abangama-200 kuphela abamenyiwe kulo nyaka ngenxa yobhubhane we-COVID-19
Abafeli-nkolo baseUganda baba ngabangcwele bokuqala abamnyama abasuka kumazantsi eSahara eAfrika ukuba babengcwele
Ingcwele yamaKatolika yakhiwa kwindawo yokubulawa kukaSt. Charles (Karoli) Lwanga kunye neSt. Kizito
Imibhiyozo yonyaka yoSuku lwe-Uganda Martyrs ewela nge-3 kaJuni ibibhiyozelwe phantse ngabahambi nge-200 kuphela abamenyiwe ngenxa yobhubhane we-COVID-19. Kunyaka ophelileyo, umsitho wawusezantsi kunye nokufikelela kwabahambi ngezonqulo ngenxa yokutshixwa kwelizwe.
I-23-acre Namugongo Martyrs Shrine ebekwe kwi-12 Km ukusuka e-Kampala City Centre ibingumazibuthe kwimibhiyozo yaminyaka yonke kwiikhalenda zecawa yamaRoma Katolika kunye neAnglican ngaphambi kwesifo, kutsala ukuya kuthi ga kwizigidi ezi-3 zabantu abavela kwihlabathi liphela, behamba iintsuku neeveki. okanye usuka eKenya, eTanzania, eRwanda, eSouth Sudan, eZambia, eMalawi, kwiRiphabhlikhi yaseDemocratic Republic of Congo, eNigeria nakwelinye ilizwekazi xa bekhumbula ulutsha olungamaKrestu olungama-45 oluquka ama-Anglican angama-23 kunye nama-22 amaKatolika abulawa phakathi kuka-1885 no-1887. olawulayo (monarch) Kabaka Mwanga woBuganda Kingdom kuvavanyo lokunyaniseka okwahlukileyo phakathi kwenkosi nokholo.
Ingcwele yamaKatolika yakhiwa kwindawo yokubulawa kukaSt. Charles (Karoli) Lwanga kunye neSt. Kizito. Eyakhelwe ngentsimbi, nganye yeentsika ezingama-22, imele ngamnye wabafeli-nkolo abangama-22 abangama-Katolika.
In 1969, Uganda yayililizwe lokuqala e-Afrika ukundwendwelwa ngupopu olawulayo, xa uPopu Paul VI wabhiyozela ubunzima kwitempile esandula ukwakhiwa njengesikhumbuzo seminyaka engamashumi amahlanu ukusukela ekubethelweni komfeli-nkolo nguPopu Benedict XV ngo-1920.
Kwiminyaka emihlanu ngaphambili ngo-1964, i-Uganda Martyrs yahlanjululwa kwi-St Peter's Basilica eRoma eyenza ukuba babe ngabangcwele bokuqala abamnyama abavela kwi-Afrika engezantsi kweSahara ukuba babe ngabangcwele.
Xa uPopu John Paul II wayetyelele e-1993, wayinyusa iShrine wayisa kwi-Minor Basilica ngo-1993.
Ngo-2015, xa utyelelo luka-Pope Francis lwaqinisekiswa yi-Vatican, urhulumente wase-Uganda kunye ne-Archdiocese yase-Kampala bazibophelela nge-24 yezigidi zeedola ekuphuculeni ii-Shrines ezazifunyenwe ngu-Monsignor Mbwega (uMfundisi wase-Parish 1954-1980) kwindawo ye-world world. imele ubuKrestu kunye nokhenketho ngokwakha ngokutsha inkundla ejikeleze iLake Martyrs Lake.
Ngexesha lokwakha ngokutsha iinjineli zaye zalirhabaxa eli chibi kwaye zaqinisekisa ukuba uxinizelelo lukaMbwega lufakwe kukuntyiloza kweekwayari zeentaka kufakwe kuyilo ukuze kugcinwe ukuzola kwendlu engcwele.
iiyure 21 eyadlulayo